Natiijada tijaabo kale uu Donald Trump u maray Covid-19 oo la shaaciyey
Max-suulkan ayaa soo baxaya xilli madaxweynaha Mareykanka uu dib u bilaabay ololihiisa doorashada.
WASHINGTON, US – Donald Trump ayaa laga waayey Covid-19, mana jirto cid kale oo uu qaad-siiyey, sidda uu sheegay dhakhtar Aqalka Cad. Qoraalka wuxuu xusay Madaxweynaha Mareykanka uu caafimaaday caabuqa faafa.
"Waxaan idinla wadaagi karaa in laga waayey, maalmo isku xig-xigay, iyaddoo la adeegsanayo habka cusub ee baaritaanka fayruska," ayaa lagu yiri war qoraal ah oo Isniintii kasoo baxay hoyga looga arimiyo dalka Mareykanka.
Dhakhtarka ayaa ku adkeystay in shaacintan aysan ahayn mid lagu deg-degay balse ay daaran tahay tijaabooyin dhowr jeer ay sameeyeen.
Ku dhawaaqistan ayaa kusoo hagaageysa xilli Trump uu u socdaalay magaalada Sanford ee gobolka Florida halkaasoo uu kaga qeybgalayo isu soo baxii ugu horeeyay tan iyo markii uu soo ritay safmarka Coronavirus.
Conley oo aan shaacin waqtiga la baarey Trump ayaa ku adkeystay in ay raaceen habraaca saxda ah taasoo muujisay "in madaxweynuhu la nooleyn".
Bishaan October 2-deeda, Trump ayaa ku dhawaaqay in laga helay Covid-19. Isbitaalka milatariga ee Walter Reed oo la dhigay wuxuu kasoo baxay 5-ta October. Kadib markii uu soo baxay, wuxuu ku laabtey Aqalka Cad.
Dhamaadka todobaadkii hore, wuxuu banaanka Aqalka Cad kula kulmay taageereyaashiisa isagoo kasoo hadlayey balakoonka. Dadka naqdinaya waxay ku dhaliileen in uu dhayal-sanayo cudurka uuna halis gelinayo shaqaalaha.
Waqtiga uu Aqalka Sare go'aan ka gaarayo xilka ka qaadista Trump
Caalamka 19.12.2019. 12:19
Donald Trump oo farageliyey xukun lagu riday siyaasi ay saaxiibo yihiin
Caalamka 11.07.2020. 10:15
Banaanbaxyadda Mareykanka: Donald Trump oo dacwad lagu soo oogay
Caalamka 05.06.2020. 16:08